Track Roller Bearings Rust Phakathi Kwezinqubo - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Landelela i-Roller Bearings Rust phakathi kwezinqubo
Track Track Roller Bearings Rust phakathi kwezinqubo
Ukukhiqiza umsebenzi wokulwa nokugqwala kuwumsebenzi obalulekile, ikakhulukazi phakathi kwenqubo yokukhwabanisa, njengokuthwala kwisitshalo sokwelashwa okushisa emva kokukhethwa, ukuhlanza, ukugaya, kunezinqubo eziningi zomgwaqo. Uma umkhiqizo ungasetshenziselwa ukukhiqizwa kwamanzi, ukucubungula okulandelanayo kuyadingeka ukuba kugcinwe phakathi komtapo wezincwadi, ngakho-ke inqubo yokugcina isitoreji phakathi kwezindandatho ezithwalayo kufanele ibe yimfucuza.
Phakathi kwenqubo yokulwa nokugqwala izindlela ezivame ukusetshenziswa:
1. efakwe esitini esinomshini
Umshini wokugqoka ugobile ku-5% i-nitrite ne-0.6% isisombululo se-sodium carbonate, i-rust effect isamanje, kepha inqwaba ye-anti-rust tank kanye neminye imishini, ithatha isikhala esiningi, ukuphathwa akuyona into elula.
2. Gubha isisombululo esinamandla sodium nitrite
Ngemuva kokuhlanza umkhiqizo, cwilisa ngesisombululo esine-15% -20% ye-nitrite ne-0.6% ye-carbonate ye-sodium bese uyibeka. Ukusebenzisa le ndlela yenkathi yayo yokunciphisa imifushane, ngokuvamile kugcina izinsuku ezingu-7-14 kuphela, kanti ngenkathi yemvula, ngenxa yesimo sezulu imanzi, ingahlala izinsuku ezingu-2-3 kuphela
Kufanele kusetshenziswe kabusha, kudinga ukuchitha abasebenzi kanye nemali.
Njengamafutha okulwa nokugqwala njengomkhiqizo ophelile. Le ndlela kufanele ibe ekusetshenzisweni kwenqubo elandelayo ngaphambi kokuhlanza, inkinga enkulu.
Ukwethulwa kobuchwepheshe obusha bokulwa nokugqwala
Ngemuva kokusebenza nabakhiqizi abahlobene, iminyaka eminingi yokukhiqiza ibonisa ukuthi ukugqwala phakathi kwenqubo yokwenza ukuthuthukiswa okumbalwa ekusebenziseni i-leaching effect-proof proof is best. Isivivinyo sokuqala se-anti-rust roller, imikhiqizo esiphelile kanye nokuqedwa ngosuku nosuku lwe-nitridi ye-nitrijisi uhlanza kanye, izinyanga ezingu-3 ngemuva kokuthi imiphumela yokuhlolwa ingatholi ukubola, futhi manje ekukhiqizeni imikhiqizo engapheliyo ne-leaching anti- ukugqwala, nomphumela nakho kuyiqiniso. Uhlelo lwe-Leaching spray rush-proof lulula, indlela kanje:
1. Ukuthengwa nokwakhiwa kwemishini
Ngokusho kwenani lemikhiqizo eqedile ukugcinwa, ukusungulwa kwelabhulali ephakathi, umhlaba ophansi, ophakathi ungasungula umgwaqo, cishe u-1.5m, owawudlulisela imoto yokuthwala. Ekupheleni kwesiteshi kubeka isitoreji samanzi ase-nitrite amanzi, ifomu lesisombululo se-5% -10% le-nitrite le-sodium kanye ne-0.6% ye-carbonate ye-sodium, futhi wenze umsebenzi omuhle emgodini osemuva, bese kuthi izindandatho ezithintekayo zihlanganiswe kokubili izinhlangothi zephansi Ngaphansi kwamatshe amabili okuthwala phakathi kwe-0.6m. Ungakhuluma ngomklamo welabhulali ophakathi we-64m2 noma kunjalo, i-sodium nitrite yamanzi echibini yi-1m3.
2. Indlela yokwenza
Njalo ekuseni ngamanzi ase-nitrojamu ashisa, amanzi aphuma epompheni aphuma echibini, ngokusebenzisa ipayipi yerabha kuya ekhanda lokugeza, njengeshawa ehlanza amasongo. Ngemuva kokuhlanza isisombululo samanzi emgodini wamanzi emuva kokuya echibini, ngemuva komgogodla ekupheleni kwechibi, ngecingo elihle ne-gauze ukwenza isihlungi emthunzini wendwangu ungene echibini. Umtapo wolwazi oluphakathi kufanele ube ohlanzekile futhi uhlanzekile.
Ikhambi lechibi lihlolwa njalo ezinsukwini ezimbili. Ngokusho kwemiphumela yokuhlolwa, isikhathi sokushintshwa kwesixazululo echibini senziwa ngokusho kwenyanga ehlukile, futhi ukushintshaniswa kuqediwe njalo emavikini amabili ngo-Ephreli nangoSeptemba, futhi inyanga ishintshwa njalo ngenyanga.
I-Leaching spray rust, ukuphathwa okulula kakhulu, kodwa futhi kulondoloza umsebenzi, phakathi komtapo wolwazi nabantu ababili abagqwala abakwazi ukuqedwa, futhi manje nomuntu angenza futhi omunye umsebenzi, kusukela kumphumela wokulwa nokugqwala kubaluleke kakhulu. Ngenyanga ka-2003 ku-7002136 no-3620 i-roller ngaphezu kwamaphilisi angu-4000, ukusetshenziswa kwe-leaching rust, cishe unyaka ukugcina ukukhanya okukhulu, akukho ukubola. Ngaphezu kokusetshenziswa kwamakhemikhali kubuye kube nokulondolozwa okukhulu esikhathini esedlule, i-workshop yenyanga nenyanga yokudla okungaphezu kuka 4000 kilogram ye-nitrium nitrite, futhi manje i-200 kg kuphela, isindisa cishe ingxenye.
I-Leaching ye-spray-proof proof method ngokusebenzisa abakhiqizi abafanelekayo eminyakeni yamuva, ukuhlolwa nokusetshenziswa, ukufakazela ukuthi inqwaba, enkulu, umjikelezo omude wezintambo eziphethwe ngokusemthethweni kulungile kakhulu.
Ama-Non-Standard Bearings Lapho Ukufaka Kujikeleza